samedi, 06 avril 2019 20:35
Spaoron'ny Mpiasam-panjakana : Misokatra ny taom-pilalaovana 2019
Diabe niainga teo amin'ny Tranombokim-pirenena Ampefiloha Antananarivo, nipaka tao amin'ny kianja mitafo Mahamasina no nanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana ASIEF 2019.
Ny ASIEF dia sehatra fampandraisana anjara sy fitazaim-batana ho an’ireo mpiasam-panjakana tsy ankanavaka.
Maherin’ny 500 ireo mpiasam-panjakana, sy fikambanana tanora maro ary solontenan'ny mpianatra no nandray anjara tamin'ny diabe tao anatin'ny loha-hevitra : « Mpiasam-panjakana salama, mavitrika sy mahay ».
Nofanan'i Praiminisitra moa ny famatsiam-bolan'ity hetsika ity ho an'ny primatiora, fa samy mianto-tena ny mpiasa.
samedi, 06 avril 2019 20:32
Fahasalamana: 6% ny taham-pahafatesana manerantany vokatry ny tsy fanaovana spaoro
Ankalazaina isan-taona isaky ny 6 Aprily ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny fanatanjahan-tena mivoy ny fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana maharitra.
samedi, 06 avril 2019 20:17
Antsirabe: Niverina ny famatsiana herinaratra
Nanomboka tamin’ny 5 ora hariva teo no niverina nirehitra ny jiro teto an-drenivohitr'i Vakinankaratra, rehefa tapaka nanomboka tamin'ny 10 ora maraina noho ny fahasimban'ny fitaovana.
Tonga nitsidika ireo fitaovana nisy fahasimbana teto amin’ny foibe famokaran'ny Jirama Antsirabe androany ny Minisitra mpisolo toerana ny Minisitry ny Angovo, ny Rano, ny Akoran’afo; notarihin’ny Tale iraisam-paritry ny Jirama Vakinankaratra.
samedi, 06 avril 2019 18:48
Maroantsetra: Miitatra ny sakoroka
Amin'izao fotoana izao efa misy trano araiky hafa indray mirehitra ao Tanambao, raha tao Ankiakandrefana no nisy may teo.
samedi, 06 avril 2019 18:36
Andry Rajoelina: Niarahaba an'i Azaly Assoumani voafidy indray ho filohan'i Comores
Noraketina an-taratasy ny fiarahabana sy firariantsoa nalefa amin'ny filoha Azaly Assoumani.
samedi, 06 avril 2019 18:22
Maroantsetra: Rotaka ...
Misy olona maty voatifitry ny Polisy, may ny trano. Misahotaka ny eto Maroantsetra nanomboka ny fiafaran'ny tolakandro teo.
samedi, 06 avril 2019 18:12
Fanadiovana an'i Toamasina: Mandray anjara ny orinasa Ambatovy
Mandray anjara amin’ny asa fanalàna ny fako eto amin'ny tanànan'i Toamasina ankehitriny ny orinasa Ambatovy.
Mifanolo-tànana amin’ireo orinasa tsy miankina hafa ihany koa Ambatovy, mandritra ny telo andro, araka ny fangatahan’ny tomponandraikitra eto an-toerana.
samedi, 06 avril 2019 17:42
Kianja Barikadimy: Roso ny asa hamitana azy tanteraka
Natomboka tamin'ny Tetezamita ny fanamboarana ireo asa vaventy teto amin'ity kianjan'i Barikadimy Toamasina ity, izay nokasaina hatao manarapenitra, saingy nihantona noho ny resa-bola.
Nikatona tsy azo nampiasaina ny kianja taorian'izay noho ny didin'ny Fitsarana.
Nitondra anjara biriky ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ka nametraka "tapis synthétique" ho solon'ny bozaka filalaovana eo ambony kianja, natao anatin'ny tetikasan'ny filoha tamin'izany.
samedi, 06 avril 2019 15:35
Port-Bergé: Olona misy telo nisy naka an-keriny
Tsy honohono fa misy mpangalatr'olona eto Port-Bergé. Tamin’ny alakamisy izao dia olon-dehibe telo no nisy naka an-keriny ary tsy mbola misy hita.
Omaly indray dia nisy roalahy nikasa haka an-keriny zaza iray saingy tsy tontosa izany. Voasambotra ny iray tamin’izy ireo ary atao fanadihadiana ao amin’ny Polisy.
Avy any Ambondromamy ireo jiolahy tonga manao ity asa ratsy aty Port-Bergé ity.
samedi, 06 avril 2019 15:13
Vohémar: Misy mitaky ny hanesorana ny sefo Distrika
Miakatra ny feo eto Vohémar, iray volana tsy hisokafan’ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana solombavambahoaka. Misy andian’olona mitaky ny hialan’ny sefo Distrika.
Antony maro no ambaran’izy ireo fa mitondra amin’izao fitakiana izao. Voakasik’izany ny ara-pitantanana, ny fifandraisany amin’ireo solontenam-bahoaka eny fitony ary koa ny fananan-tany.
Mandrahona ny hanao filaharam-be hamakivaky ny tanàna eto Vohémar ireo mitaky ny hialan’ny sefo Distrika io, ary ho lohalaharana amin’izany ny zokiolona mba hanaitra ny Fanjakana handray fanapahan-kevitra satria "ny ahiahy tsy ihavanana", hoy izy ireo.